लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंकले पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना लागि ऋण दिने
११ फागुन, काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा माछापुच्छ्रे बैंकले पिलुवा खोला–३ जलविद्युत आयोजना सहवित्तीयरकण अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्ने भएको छ । दुई बैंक र माबिलुङ्ग इनर्जीबीच सोमबार यसको लागि सम्झौता भएको हो ।
माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड संखुवासभा जिल्लाको साविकको सिद्धकाली र मावादिन गाविसहरुमा अवस्थित पिलुवा र सिखुवा खोलामा निर्माण गर्ने ४.९५ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा खोला–३ जलविद्युत आयोजनाको लागि उक्त आयोजनाको निर्माण लागत जम्मा रुपैया ९३ करोड ७० लाख रहेको छ । बैंकहरुले आयोजना लागतको ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत कम्पनीको स्व.लगानी रहनेछ ।
उत्पादन क्षमता ४.९५ मेगावाट रहेको माबिलुङ्ग इनर्जी लि. ले झण्डै २८.४१७ गेगावाटआवर विद्युत वार्षिक रुपमा उत्पादन गरी राष्ट्र्रय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यो आयोजना फेबु्रअरी २०२२ मा संचालनमा आउने बताइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०१९÷२० को समिक्षा प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले जम्मा १५ वटा नयाँ आयोजना मार्फत संयुक्त रुपमा १३५.३९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्र्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
साथै उक्त १५ वटा आयोजनाहरुलाई समेत समावेश गर्दा जम्मा ९८ वटा आयोजनाहरु संचालनमा आएका छन् र तिनीहरुको संयुक्त उत्पादन ६९६.१७ मेगावाट रहेको छ ।
आज नेप्सेमा २ कम्पनिको बोनस शेयर सुचिकृत
१८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से ) मा…
एकैदिन सत्र सयले घट्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कतिमा कारोबार हुँदै छ ?
१८ फागुन, काठमाडौं । केहि दिनदेखि निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै…
एस्कर्ट्सको नयाँडीगम्याक्स थ्रीइमसिन नेपालमा
एनआईसी एशिया बैंकले ल्यायो आरएमडीसी लघुवित्तको सेयर लिलामीमा